Fifandraisana Madagasikara sy Vatican Valim-pitiavana noho ny fitomboan’ny kristianina ny fitsidihan’ny Papa
“Tambin’ny fitomboan’ny isan’ny kristianina aty Madagasikara io fitsidihin’ny Papa io”, hoy ny Pretra Malagasy iray izay mianatra sy miasa any Roma. Tsy ny katolika ihany fa ny kristianina rehetra no mitombo.
Manamafy izany ny vaovaon’ny Vatican izay hita ao amin’ny “annuarium statisticum Ecclesia” anaty diarin’ny papa na ny “annuaire pontifical” izay milaza fa “Le nombre de catholiques augmente dans le monde, spécialement en Afrique et surtout à Madagascar”. Raha ny vaovao ofisialin’ny Solontenan’ny Papa eto Madagasikara eny Ivandry, ao amin’ny tranokalan’ny infocatho.cef.fr dia mahatratra 41% amin’ny mponina eto Madagasikara no kristianina ka ny 23,42% no mpivavaky ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina.
Fiantrana sy velon-tena
Miantsehatra amin’ny lafiny sosialy ny fiangonana, ankoatra ny fitsaboana sy ny fanampiana ireo sahirana tahaka ireo iantsorohan’ny Mompera Pedro izay iray fiaviana amin’ny Papa ray masina, manana ny maha izy azy amin’ny fanabeazana ireo sekoly katolika 3 400 mahery manerana ny Nosy, manomboka amin’ny garabola ka hatramin’ny fampianarana ambaratonga ambony manerana ny diosezy maro. Nisy lanjany teo amin’ny toekarena koa ny fihariana nentin’ireo misionera tahaka ny fikambanan’ny Saletin nitondra ny ovy tao Vakinakaratra, ny Bénédictin nitarika ny fiompiana akoho manatody lava tao Mahitsy, ny fiompiana akoho gasy isaky ny vita batemy tany Tsiazompaniry.